 Ya mere, sitenụ nꞌajọ omume unu pụta, kwụsịnụ ịgha ụgha, ịbụ ndị ihu abụọ, ndị na-ekwo ekworo, ndị na-ekwutọ mmadụ ihe ha. Ọ bụrụ na unu edetụla obi ebere Onyenwe anyị ite, mara na ọ dị mma, na-adịnụ dị ka ụmụ a mụrụ ọhụrụ, ndị agụụ ịṅụ mmiri ara na-agụ. Bụrụnụ ndị ọ na-agụ agụụ ịṅụ mmiri ara ka unu bụrụ ndị na-eto eto, na ndị a zọpụtara.
 Onye ọ bụla naekwu ihe ọzọ dị iche bụ onye na-eweli onwe ya elu na onye nzuzu. Ọ bụkwa onye hụrụ ịrụ ụka na ịjụ oke ajụjụ nꞌanya, nke na-eweta ekworo, esemokwu, nkọcha na ajọ echiche. Ndị a hụrụ irụ ụka nꞌanya, ndị mmehie kpuchiri obi, amaghị otu e si ekwu eziokwu. Nꞌebe ndị dị otu a nọ, ozi ọma a bụ ụzọ dị mfe ha si akpata ego. Si nꞌebe ha nọ wezuga onwe gị.
 Mgbe ọ bụla kwa anyị na-agbaso ọchịchọ ọjọọ nile nke ndụ anyị, ọ bụ nanị ihe ọjọọ ndị a ga na-apụta ìhè na ndụ anyị: iche echiche na-adịghị ọcha, ịkwa iko na agụụ ịkwa iko. Ikpere arụsị, iri amusu, ibu iro nꞌobi, na ịlụ ọgụ, ekworo na iwe, ịkpa iche iche, nkewa, ịhọ otu. Ịkpọ asị, igbu ọchụ, ịṅụbiga mmanya oke, oke oriri na ihe ndị ọzọ yiri ha. Ma dị ka m gwara unu nꞌoge gara agwa, ndị na-eme ihe dị otu a agaghị abanye nꞌalaeze Chineke. Ma mgbe Mmụọ Nsọ na-achị achị na ndụ anyị, ụdị ndụ a ga-apụta ìhè nꞌime anyị: ndụ ịhụnanya, na ọṅụ, na udo, na ogologo ntachi obi, na obi ọma, na ịdị mma, na ikwesị ntụkwasị obi, na ịdị nwayọọ, na nke emebigaghị ihe oke. Ọ dịkwaghị iwu na-emegide ihe ndị a. Ma ndị nile bụ ndị Kraịst akpọgidela anụ ahụ ha, ya na ọchịchọ ha nꞌelu obe. Ọ bụrụkwa na anyị na-adị ndụ site nꞌike Mmụọ Nsọ, ka anyị soro nduzi na ntụzi Mmụọ Nsọ nꞌakụku nile nke ndụ anyị. Mgbe anyị na-eso ụzọ a, anyị agaghị abụ ndị na-ele anya ka ndị ọzọ sọpụrụ anyị, ma ọ bụ too anyị, nꞌihi na nsọpụrụ na otuto dị otu a, na-ebute ekworo na obi ilu nꞌetiti anyị.
 Ma ọ bụrụ na obi unu ejupụta nꞌihe ilu na ekworo, o kwesịghị ka unu kwusie okwu ike banyere amamihe unu na ịdị mma unu. Nꞌihi na nke a abụghị eziokwu. Ụdị amamihe dị otu ahụ esiteghị nꞌebe Chineke nọ bịa. Ọ bụ amamihe nke ụwa, amamihe nke ekwensu, ọ bụghị amamihe nke Mmụọ Nsọ.
Nꞌihi na Pailet maara nke ọma na ndị isi ndị Juu raara Jisọs nye nꞌaka ya site nꞌekworo.
Mgbe ndị isi ndị Juu hụrụ igwe mmadụ ndị a, ndị gbakọrọ ịnụ okwu Pọl na Banabas, ha bidoro inwe anya ụfụ megide Pọl na Banabas bidokwa ikwu okwu ọjọọ megide okwu nile ha na-ekwu.
Ụmụ Jekọb sitere nꞌekworo ree Josef dị ka ohu. A kpọọrọ Josef gaa nꞌala Ijipti. Ma Chineke nọnyeere ya nꞌebe ahụ.
Nꞌihi na Pailet maara na ndị isi nchụaja sitere nꞌekworo chọọ igbu Jisọs, nꞌihi na ihe banyere ya dị ọtụtụ mmadụ mma.
Ugbu a ana m arara unu nye nꞌaka onye ahụ pụrụ ichebe unu, ime ka unu ghara ịda, onye ahụ pụrụ ịkpọbata unu nꞌihu ya dị ebube nꞌọnọdụ enweghị ntụpọ.